Ny 42% amin'ny Britanika dia mihevitra ny handeha hiala sasatra any Arabia Saodita
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Ny 42% amin'ny Britanika dia mihevitra ny handeha hiala sasatra any Arabia Saodita
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fivoriana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Tourism • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Arabia Saodita dia nanao hetsika fizahan-tany nahomby tamin'ny taona 2020, ary antenaina hitombo bebe kokoa ny isan'ny mpitsidika miaraka amin'ny fiverenan'ny dia iraisam-pirenena vao haingana.
Ny indostrian'ny fizahan-tany mivoatra ao Arabia Saodita dia voatendry hiverina amin'ny làlany mba hanatratrarana ny tanjony fatra-paniry laza, satria efatra amin'ny 10 Brits no milaza fa handinika ny fialan-tsasatra ao amin'ny fanjakana, hoy ny fikarohana navoaka androany (Alatsinainy 1 Novambra) nataon'ny WTM London.
Ny tanjona dia hahita fisondrotana amin'ny drafitra amin'ity herinandro ity satria maro ireo orinasam-pitaterana dia milaza fa mety hanao sonia fifanarahana ara-barotra amin'ny orinasa Arabo Saodiana ao amin'ny WTM London, izay manomboka anio ary mitohy hatramin'ny alarobia 3 Novambra.
Ny fijery feno fanantenana dia avy amin'ny valin'ny fitsapan-kevitra roa WTM London, ny iray natao teo amin'ireo mpanjifa britanika ary ny iray kosa niaraka tamin'ireo matihanina ara-barotra iraisam-pirenena, izay mandrafitra ny WTM Industry Report.
Ny fitsapan-kevitry ny mpanjifa 1,000 dia nahita fa ny 42% amin'ny olon-dehibe UK dia mihevitra ny handeha hiala sasatra any Arabia Saodita. Ny 19% hafa dia nilaza fa tsy azo inoana fa azo resy lahatra.
Ny fitsapan-kevitra nataon'ireo matihanina ara-barotra 676 avy amin'ny firenena manerana izao tontolo izao dia nahita fa ny antsasany mahery (51%) no nikasa ny hanao resaka ara-barotra amin'ireo orinasa Saodiana ao amin'ny WTM London amin'ity herinandro ity.
Io no toerana voatonona be indrindra, mialoha an'i Italia eo amin'ny laharana faharoa (48%) ary Gresy (38%).
Nilaza ihany koa ireo mpamaly momba ny varotra fa mety hanao sonia fifanarahana amin'ny orinasa avy any Arabia Saodita izy ireo, miaraka amin'ny firenena nahazo isa 3.9 amin'ny dimy - indray, ny mety ho avo indrindra amin'ny fitsapan-kevitra.
Fanampin'izay, 40% amin'ireo namaly no nilaza fa azo inoana (30% tena azo inoana; 10% angamba) hanaiky fifanarahana amin'ny fikambanana Arabia Saodita/Saodiana ao amin'ny WTM London.
Ny fanjakana dia nampitombo ny asa ara-barotra tamin'ny taona 2021 taorian'ny fanakatonana ny taona 2020.
Talohan'ny taona 2019, ny visa fizahan-tany any Arabia Saodita dia voafetra ho an'ny mpanao raharaham-barotra, mpiasa vahiny ary mpivahiny mitsidika ny tanànan'i La Mecque sy Medina.
Nanokatra ny sisin-taniny ho an'ny mpizaha tany iraisam-pirenena ny firenena tamin'ny fanombohana ny programa e-visa tamin'ny Septambra 2019.
Tamin'ny 1 aogositra 2021, nandray mpizaha tany indray i Arabia Saodita 18 volana taorian'ny naatony ny fizahantany noho ny valan'aretina Covid-19.
Nametraka tanjona lehibe ho an'ny mpizaha tany 100 tapitrisa izy amin'ny taona 2030, ho ampahany amin'ny ezaka amin'ny fampitomboana ny toekareny mihoatra ny solika fôsily.
Ankoatra ny maha fonenan'i Lameka sy Medina, tanàna roa masina indrindra ao amin'ny Islam, ny firenena dia mamolavola “tetik'asa giga” mba hampivelarana ny lova, ny kolontsaina ary ny harena voajanahary ary koa ireo valan-javaboary sy toeram-pialan-tsasatra.
Ireo mpandraharaha toa ny Explore izao dia manolotra fitsangatsanganana escorted ao amin'ny firenena ary mivoatra ihany koa ny sehatry ny fitsangantsanganana - MSC Cruises sy Emerald Cruises dia mikasa ny hiasa amin'ny lalana manasongadina an'i Arabia Saodita amin'ny volana ho avy.
Ary ny tanànan'i AlUla Arabia Saodita dia nanangana toeram-pivarotana fitsangatsanganana sy sehatra fanofanana an-tserasera mba hanampiana amin'ny fahafantarana ny toerana haleha eo amin'ireo mpandraharaha fitsangatsanganana UK.
Fahd Hamidaddin, Tale Jeneralin'ny Saodiana Tourism Authority dia niresaka tamin'ireo matihanina indostrian'ny fizahantany tao amin'ny ATM 2021 - hetsika rahavavin'ny WTM London.
Nilaza izy fa i Arabia Saodita dia nanao fampielezan-kevitra fizahan-tany nahomby tamin'ny taona 2020, ary antenaina hitombo bebe kokoa ny isan'ny mpitsidika miaraka amin'ny fiverenan'ny dia iraisam-pirenena vao haingana.
Ankoatra ny fampivelarana ny fahazoan-dàlana ho an'ny fizahantany, ny fanjakana dia mampiasa vola amin'ny hetsika ara-panatanjahantena manerantany mba hampisondrotra ny mombamomba azy.
Tamin'ny 2019, nampiantrano ny fiadiana ny tompondaka eran-tany an'i Anthony Joshua izy ary hanao ny hazakazaka Grand Prix voalohany amin'ny volana ho avy (Desambra 2021) ao an-tanànan'i Jeddah.
Simon Press, Talen'ny Fampirantiana WTM London, dia nilaza hoe: “Tena mamporisika ny delegasiona Saodiana ao amin'ny WTM London ny mamaky ny vokatra tsara avy amin'ny fitsapan-kevitra momba ny varotra mpanjifa sy ny dia. Samy milaza izy ireo fa ny fampiasam-bola goavana amin'ny fizahan-tany dia efa mandoa dividends, ary ny fifanarahana izay hatao ao amin'ny WTM London dia azo antoka fa hanampy ny toerana mankany amin'ny fanatratrarana ireo tanjona fatra-paniry laza.